China Fithem Ks-009SBlu Bluetooth lalao an-tariby tsy misy rano fanatanjahan-tena sy fialamboly an-trano famokarana headphones mpanamboatra sy mpamatsy | Kaiwansi
Halaviran'ny Bluetooth 10M
1. Ny volavolan'ity headset ity amin'ny ankapobeny dia tena sariaka amin'ny mpampiasa, afa-tsy ny vombon'ny antsantsa, ny elatry ny sofina dia tsy malefaka amin'ny fitaovana fotsiny fa tena akaiky ny famolavolana ihany koa. Tsy hisy fahatsapana mahazo aina mihitsy amin'ny sofina. Miorina ergonomika izy ary tena miorina tokoa. Amin'ny fampiasana fitaovana nohamafisina dia tsy hianjera izy io noho ny fihetsiketsehana, ary ny mari-pahaizana tsy misy rano amin'ny IPx5.
2. Raha ny kalitaon'ny feo no ampiasaina dia ampiasaina ny lavaka vy mba hahatonga ny stereo spatial hisokatra kokoa, ny vahaolana dia bass kokoa, ary ny hafanana ambany dia mahery.
3. Ny fantsom-pamokarana Bluetooth be mpihanatontosa be 5.0 izay mahatonga ny fifandraisana ho marin-toerana, fanjifana herinaratra ambany, traikefa bebe kokoa ary fihainoana hira kokoa.
4. Manana tanjaka andriamby ny satroka sofina, ka tsy hisy tarehin-ratra tariby rehefa tsy ampiasaina ny earphone.
5. fonosana lanjan'ny boky:
Sasa / boaty 1
Haben'ny boaty: 43 * 27 * 27.5 CM
Lanja NET: 3,8 kg
Lanja mavesatra: 4.4 kg
6. 12 andro ny androm-piainana maharitra, ary tsy matahotra ny hisy fiantraikany amin'ny asanao na ny toetranao ianao rehefa tsy mandeha amin'ny herinaratra ny bateria rehefa manao dia lavitra ianao na miasa!
Teo aloha: Fithem Ks-816 Wireless Bluetooth tws headset ambany-treble headset dia azo namboarina ho fango
Manaraka: Fithem ks-011b mozika tsy misy rano Bluetooth vozona mihantona headset lalao
FITHEM KS-010 Wireless headphone Bluetooth Wireless ...
FithEM KS-017 finday tsy misy tariby Bluetooth loha ...
FithEM KS-015 headphone tsy misy tariby andriamby atra ...